भाउजुको ५ प्रतिशतले कस–कसलाई डुबायो ?
Homerajnitiभाउजुको ५ प्रतिशतले कस–कसलाई डुबायो ?
Kumar Bhandari 11:01 AM
त्यसो त आरजुको नजिक भएका कारणले नै प्रहरी एआइजी जयबहादुर चन्द आइजीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको कानुनी अड्चन झेल्न कठिन भएपछि आरजुका कारणले नै उनलाई ब्याक गरिएको थियो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त आरजु नराम्रोसँग हावी भएकी छन् । अहिलेसम्म पार्टीभित्र पदाधिकारी नियुक्ति नगरिनुको कारण पनि आरजुको दबाब रहेको बताइन्छ । त्यतिमात्र होइन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतलाई पनि आरजुले नै सेट गराएको कांग्रेसभित्र चर्चा चलिरहने गरेको छ ।